सास फेर्न गा’ह्रो हुने लक्षणसहितका को’रोना सं’क्रमितको संख्या बढ्दै
राष्ट्रकविको नि’धनमा बामदेव गौतमको हस्तलिखित श्रद्धाञ्जली, राष्ट्रलाई ठूलो…
नेपाली बाल कराते खेलाडी रन्जितलाई ‘वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड’ अवार्ड…
नेपालमा पनि अब को’रोनाका गम्भिर प्रकृतिका विरामीलाई यो औषधि…
अन्तराष्ट्रिय अपराध अर्थ खेलकुद धार्मिकख खबर पत्रपत्रिका प्रवास खबर
खुसीको खबर! कुखुराको मासुको मूल्य घ’ट्यो
काठमाडौं। सरकारले लक'डाउन खुकुलो बनाएपछि मासुको मूल्य घट्न थालेको छ । लक'डाउनका कारण आपूर्ति नहुँदा महँगो भएको मासु लक'डाउन खुलेपछि आपूर्ति सहज भएसँगै मूल्य घट्न थालेको हो। शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी कुखुराको मासुको मूल्य घटेको पोल्ट्री…
PP	 Jul 18, 2020 0
काठमाण्डौ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले सत्तारुढ नेकपाभित्रका नितान्त व्यक्तिगत र व्यक्ति परिवर्तनमा केन्द्रित रहेको बताएका छन्। नेकपामा केही समयदेखि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा लगायतका विषयमा देखिएको विवादतर्फ संकेत…
जनताको माग : अबको प्रधानमन्त्री उज्यालोको भगवान कुलमान घिसिङ [भिडियो सहित]
TK	 Jul 8, 2020 0
काठमाडौं। कुलमान घिसिङ अहिले चर्चामा रहेकामध्ये एक हुनु । उहाँको आँसु , रोदनभित्र मुलुकको आशा भरोसा अनि विकृति र कुण्ठा पनि सँगसँगै चर्चामा छ । आखिर कुलमान को हुन् ? उनले जीवनमा कसरी प्रगति गरे ? के के हण्डरहरू खाए ? भने सन्दर्भमा योहो…
तुलसीपुर कारागारमा एक कैदीको मृ’त्यु
PP	 Jul 6, 2020 0
तुलसीपुर – तुलसीपुर कारागारका एक कैदीको आज मृ'त्यु भएको छ । ठगी मुद्दामा कैद भु'क्तान गरिरहेका कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका वडा नं ४ नि'वासी ६९ वर्षीय अमिरुल्ला मुसलमानको उपचारका क्रममा मृ'त्यु भएको तुलसीपुर कारागारका नायब सुब्बा जोखिम…
भारतमा को’रोना भा’इरस सं’क्रमि’तको संख्या करिब सात लाख
नयाँ दिल्ली – भारतमा गत २४ घ'ण्टामा कोभिड–१९ का २४ हजार २४८ नयाँ बि'रामी थपिएपछि सं'क्रमि'तको करिब सात लाख पुगेको छ । भारत हालसम्म कुल स'क्र'मितको संख्या ६ लाख ९७ हजार ४१३ जना पुगेको केन्द्रिय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले सोमबार…
साम्राज्ञीको आ’रोप सेलाउन नपाउँदै भुवनमाथि अर्को आरोप !
PP	 Jul 5, 2020 0
काठमाडौं – अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले निर्माता तथा अभिनेता भुवन केसीले आफूमाथि ‘घिनलाग्दो व्यवहार’ गरेको आ'रोप लगाइन् । ‘पर्भट’ भन्दै आ'रोप लगाएपछि भु'वन वि'वा'दमा ता'निएका छन् । साम्राज्ञीले ५ वर्षअघि फिल्म ‘ड्रिम्स’ मा काम…
PP	 Jul 2, 2020 0
काठमाडौ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना प्रकाशित गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय परीक्षा नियन्त्रण महाशाखा महाराजगञ्जले उक्त…
कार दु’र्घटनामा न्यूज २४ कर्मी कृष्ण पाण्डेकाे नि’धन
TK	 Jun 28, 2020 0
बुटवल, १४ असार । कार दु’र्घटनामा परी रुपन्देहीका पत्रकार एवं न्यूज २४ का जिल्ला संवाददाता कृष्ण बाबु पाण्डेकाे नि’धन भएकाे छ । सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तरगत बुटवल-भैरहवा सडक खण्डको तिलोत्तमा-१, ड्राइभर टोलमा गए राति भएको सवारी दु’र्घटनामा…
Breaking….भ’या’नक कार दु’र्घटनामा चर्चित पत्रकार पाण्डेको मृ’त्यु !
१४ असार, बुटवल । कार दु'र्घटनामा परी रुपन्देहीमा एक पत्रकारको मृ'त्यु भएको छ । आफैंले चलाएको बा ७ च ६९५९ नम्बरको कार दु'र्घटा हुँदा तिलोत्तमा–६ मा बस्दै आएका पत्रकार कृष्ण पाण्डेको मृ'त्यु भएको हो । बुटवलबाट घर जाँदै गर्दा बुटवल–भैरहवा सडक…
खुसीको खबर : असार १५ बाट सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन हुने! गाडी भाडा बढ्ने, यस्ता छन् अबको नियम
लामो समय देखिको लकडाउनका कारण आफुहरुको लगानी डुबेको भन्दै गुनासो गरेका सार्वजनिक यातायात ब्यवसायीलाई पनि राहत मिल्ने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको तयारी गरेपछि उनीहरुले पनि राहत पाउने भएका छन् । ठूलो लगानी थन्क्याएर…